I-ajenda yokulungiselela ukuphikisana okuphumelelayo ngo-2022 ▷ UZODLULA! | Ukwakheka nezifundo
Unqume funda ukuphikisana. Ngakho-ke sesivele sinombono ocacile ngekusasa lethu. Kepha manje kuza enye ingxenye eyisisekelo ukukhetha eyodwa. Sidinga ukuzwa lelo bizo elisitshela ukuthi iyiphi igatsha okufanele silidonse. Ngaphezu kwalokhu, ukucabanga ngeziqu esinazo, ngoba njengoba sazi kahle, kungenye yezimfuneko ezinkulu.
Lapho sesikubeke emqondweni ukuphikiswa esikuthandayo noma okusishukumisayo, sidinga ukuthenga i-ajenda. Singayibamba njengamanje, ngakho-ke ngezansi uzothola i- isilabhasi yezivivinyo zokuncintisana ezinamathuba amaningi emisebenzi khona manje
Imincintiswano ebifunwa kakhulu
Ukuphikisana kwe-Civil Guard
Ama-ajenda e-Civil Guard
Ukuphikisana kwe-Civil Guard: Omunye wemincintiswano efunwa kakhulu yi-Civil Guard. Ezokuphepha zihlala ziphakathi kwezicelwa kakhulu. Ezinye izivivinyo zokuncintisana izidingo zazo eziyinhloko ukuthi zibe neziqu ze-ESO, zibe neminyaka eyi-18 ubudala futhi zingabi ngaphezu kweminyaka engama-40 ubudala. Ukuhlolwa kwakho kuhlukaniswe kwaba ukuhlolwa komzimba (isivinini, ukukhuthazela, ukubhukuda ...) nengxenye yemfundiso (Isipelingi, ulimi , i-psychotechnics kanye nengxoxo yomuntu siqu).
Ukuphikiswa kwabacimi bomlilo: Ukuze uthathe lezi zivivinyo zabacimi mlilo, udinga iziqu zeBachelor noma okulingana nazo, futhi uneminyaka engu-16 ubudala. Isivivinyo senziwa nengxenye yemfundiso kanye nengxenye ebonakalayo (ukukhuphuka ngezintambo, ukuphakamisa izinsimbi, ukusunduza, ukugijima, ukubhukuda kanye nokugxuma okuqonde mpo). I-psychotechnics kanye nokuhlolwa kwezokwelapha kuqedela izingxenye okufanele zinqotshwe. Lapho usuthole indawo yakho, uzokwenza imisebenzi ehlukahlukene enjengokukhishwa, izimo eziphuthumayo noma ukucisha imililo.
Ukuphikiswa kwe-SAS (Andalusian Health Service): Lapha sizoba nezikhundla eziningana futhi ngasinye sazo sizoba nezidingo zazo ngendlela yeziqu. Phakathi kwabo bonke siqokomisa abaphathi, abahlelekile, abasebenza ekhemisi noma abasebenza ngokuzivocavoca umzimba, phakathi kwabanye. Ngokuqondene nokuhlolwa, kuzoba nengxenye yethiyori kanye nesifundo esisebenzayo, ngaphandle kokukhohlwa isigaba somncintiswano, lapho kuzotholakala khona inzuzo etholakalayo.
Thumela Ukuphikisa: Njengezidingo, uzodinga i-ESO degree noma okulingana nayo futhi usufinyelele eminyakeni eyi-18 ubudala. Okokuhlolwa, kuzodingeka uphase isivivinyo esibizwa ngokujwayelekile nesibili esicacisiwe, lapho ama-psychotechnics nawo angabaphikisi. Ngaphakathi kwale mincintiswano, sizophinde sithole izikhundla ezahlukahlukene (ezokuphatha, ezisemthethweni, ukuhlukaniswa, ukulingiswa noma abasizi). Ngaphezu kwalokho, baneJob Bank ekuvumela ukuthi uthole imisebenzi ehlukile ngenkathi silinde indawo yethu.
Ukuphikisana nobulungiswa: Ngaphakathi kokuphikisana nobulungiswa sithola imizimba emithathu ehlukaniswe kahle. IProcedural Management lapho kudingeka khona idiploma noma iziqu zaseyunivesithi, lapho-ke sinomzimba weProcedural Processing lapho kudingeka khona iziqu zeBachelor. Ekugcineni, umzimba we-Judicial Aid ngaye uvumeleka ngezinga le-ESO noma okufanayo. Lapho ukuphikiswa kwakho sekuvunyelwe uzokwazi ukufinyelela ekwenyuselweni kwangaphakathi. Imisebenzi okumele yenziwe ihlukile, kepha yonke yenziwa phakathi kwabashushisi namahhovisi okwahlulela.
Izinzuzo zokuba isisebenzi sikahulumeni
Ukuphathwa komphakathi kunikeza imisebenzi, abantu abaningi abayilungiselela izinyanga noma iminyaka. Umzamo omkhulu ofanele, ngoba lapho ukuphikiswa sekudlulisiwe, sizoba nezinzuzo eziningi zokuba izisebenzi zikahulumeni.
Ukuphepha kwesimo esihlala njalo: Umsebenzi uyingxenye ebalulekile yempilo yethu. Ngenxa yakhe, sizokwazi ukuthola umholo osivumela ukuthi siphile ngokunethezeka okuthile. Ngakho-ke ukuba yisisebenzi sikahulumeni kukhombisa lokho kuphepha. Inyanga ngayinye sizothola umholo wethu, kanye nezinkokhelo ezimbalwa ezengeziwe unyaka ngamunye. Kule nkambu, ukudilizwa emsebenzini akuvamile, ngoba ungaqhubeka nokusebenza uze ufinyelele eminyakeni yobudala yokuthatha umhlalaphansi.
Iholide elifanele kahleYonke imisebenzi kumele ibandakanye nesikhathi samaholide. Kuyiqiniso ukuthi lokhu akuhlali kunjalo, kuya ngohlobo lomsebenzi. Ngaphezu kwalokho, ezimweni eziningi izinsuku zokuphumula zincishiswe kakhulu. Ngakho-ke enye inzuzo yokuba isisebenzi sikahulumeni ukuba nezinsuku eziningi zeholide.
Amashejuli: Kuyiqiniso ukuthi kufanele uhloniphe uchungechunge lwezinhlelo, zombili zokungena nokuphuma. Kepha kulokhu, akuvamile ukuthi uhlale isikhathi eside kunalokho okufanele. Ngenkathi kweminye imisebenzi eminingi siqhuba inhlanhla yokutshelwa ukuthi kufanele siqedele olunye uhlobo lwamaphepha. Ngaphezu kwalokho, ngobuningi bezitebele, uzoba nekhefu lokuphuza ikhofi.
Thuthukisa amalungelo abasebenzi: Ngaphandle kokungabaza, amalungelo esisebenzi anoshintsho olukhulu phakathi kwabasebenzi bakahulumeni. Izindaba ezifana nokuthatha umhlalaphansi kanye neminikelo, njll. Zihlala ziyizindawo ezihleliwe nezihlonishwayo.
Dlulisa umncintiswano: Kuliqiniso ukuthi futhi kuyinzuzo enkulu kuningi kakhulu lwezikhundla ezinikezwayo. Lokho wukuthi, uzoba nokuhamba kwendawo, uma ufisa. Noma kungeke kube ngomunwe, kepha ngesigaba somncintiswano. Mhlawumbe kothisha kunzima kakhulu, kepha kusengabhekwa njengenzuzo enhle engabhekwa.
Izinhlobo zokuphikisana noma Abasebenzi bakahulumeni zine kuphela, kuya ngezidingo, umsebenzi uqobo nezikhundla.
Isikhulu somsebenzi: Imvamisa simazi njengesisebenzi sikahulumeni. Ngumuntu oxhunywe kwi-Public Administration. Lokho wukuthi, kuyisikhundla esimisiwe ngemuva kokudlula kokuphikisayo futhi ngathola indawo. Ngaphakathi kwalolu hlobo lwabasebenzi, sithola ukuhlukaniswa, ngokuya ngezihloko obekudingeka kuzo.
Iqembu A: Iqembu lokuqala lingahlukaniswa futhi libe u-A1 no-A2. Kokubili kokunye, uzodinga iziqu zaseyunivesithi ukuze ukwazi ukufaka isicelo salezi zikhundla.
Iqembu B: Ukufinyelela ekuphikisweni kweQembu B, udinga isihloko Sobuchwepheshe Ophakeme.
Iqembu C: Lapha sizophinde sithole okuthiwa yi-C1. Kubo kudingeka iziqu zeBachelor, kuyilapho ku-C2, kudingeka iziqu ze-ESO degree.
Izikhulu ezibambile: Yize nayo ilungiselele ukuphikisa, yehlukile kunangaphambili ngoba iyasebenza azizinze kangako. Vele, imisebenzi yomsebenzi okufanele bawenze izofana naleyo yezikhulu zezemisebenzi. Kepha abaqeqeshwayo bavela lapho kunomsebenzi oweqile noma kunezikhala ezithile okufanele zigcwaliswe noma kungenziwa okunye.
Abasebenzi: Banenkontileka evela ku-Public Administration. Inkontileka eshiwo ingaba engapheli, ehlala unomphela noma yesikhashana.
Abasebenzi besikhashana: Kulokhu sikhuluma ngomsebenzi ovame ukwenzelwa ukwelulekwa ngokomqondo futhi njengoba negama liphakamisa, ungowesikhashana.
Ngifuna ukufunda ukuphikisana, ukuthi ngingaqala kanjani?
Nalu uchungechunge lwamathiphu okuqala ukutadisha iqembu eliphikisayo futhi ungafi uzama:
Kuzohlala kufanele usethe ezinye amahora wokufunda ahleliwe. Ngoba onkhe njalo bayisisekelo sokulinganisela kanye nokukhuthaza umzimba wethu.
Qala ukutadisha kancane kancane. Khumbula ukuthi ukuphikisana kuthatha isikhathi futhi kungcono ukukwenza kalula uma sifuna umphumela omuhle. Vele, kulokhu, wonke umuntu angazibekela izinhloso zakhe. Kuyalulekwa ukuqala ngesikhathi esincane, imizuzu nje embalwa kepha ugxile kahle. Ukugxila njalo kuyisihluthulelo sokufunda okuhle.
Khumbula njalo i- isisusa. Uma usufike lapha, kufanele ukuthi kungenxa yokuthi ubucabangile ngakho, ubucabangile ngezinto ezinhle ukuthi uma uphase iqembu eliphikisayo lizokushiya. Ngakho-ke lapho ungazizwa uthanda, khumbula njalo ukugqugquzela futhi ubone ngeso lengqondo umgomo.
Ungakhathazeki uma isihloko besingazange sibe nawe njengoba ulindele. Ngoba uma ugxila kulesi sihloko kuphela, uzomosha isikhathi esiningi futhi uzuze. Akuzona zonke izingqinamba okufanele zibe nzima kangako, ungafuni okungakanani kokuthile okunesixazululo.
Ukuphikisa kufana nokuthi bekungumsebenzi. Kuliqiniso ukuthi ekuqaleni ayikhokhelwa, kepha kufanele siyithathe ngaleyo ndlela. Ungakhathazwa ushintsho lokuqala, zihleleke futhi ungagcwali kakhulu.
Kunabantu abaqala ngifunda cishe amahora amathathu ngosuku ngenyanga yokuqala. Kepha njengoba sibonisile, kungahle kube khona amakhefu, kepha kuhlala kunokugxilwa okuningi. Ngemuva kwalokho, ngenyanga elandelayo, ungangeza usuku lwakho lokufunda.
Njalo, akulimazi ukwenza okuthile uhlobo lokuhlolwa mbumbulu. Ngale ndlela uzoba nokuxhumana okuthile nalokho ozokuthola lapho kufika usuku olukhulu, futhi uzohlola ulwazi lwakho.
Khumbula ukuthi kungakuhle ukuthi ufunde kuqala, bese udwebela okubaluleke kakhulu bese wenza izifinyezo ukulungisa imiqondo.
Ingabe kunzima ukwedlula ukuphikisa?
Akuwona umbuzo olula ukuwuphendula. Ngaphezu kwanoma yini ngoba ngaphakathi kobunzima kukhona amaphuzu ahlukile. Enye yazo uhlobo lokuphikisana esiziveza kukho, kanye nesilinganiso salo ngaphakathi kwamaQembu A, B noma C. Ngakolunye uhlangothi, kuzoba nesikhathi lapho sizinikezela khona, ngoba kuthatha ukubekezela okukhulu nokusebenza , kanye nokuhleleka.
Ngakho konke lokhu, kufanele kukhunjulwe ukuthi abantu abaningi bachitha iminyaka ngaphambi kokuvuma. Kepha kumayelana nokuyeka, ukugxila enjongweni nasekuyenzeni. Noma ngezinyathelo ezincane, kepha ungahlala njalo. Sithola ubufakazi bazo zonke izinhlobo, lapho abanye bafingqa khona ukuthi bekuxakile, kanti abanye abakutholanga njengoba kuchaziwe. Ngakho-ke njengoba sisho, kuzoya ngomuntu, izindlela zakhe zokusebenza nokuzimisela kwakhe.
Kubiza malini ngokusemthethweni
El umholo wesikhulu Kunqunywa yiqembu oliphikisile. Kepha ngaphezu kwalokho, kunezelwa ezinye izinto ezifana nendawo okuyiwa kuyo noma ubude besikhathi sesikhundla. Kepha cishe imiholo yile elandelayo:
Iqembu A1: Umholo wakho ngenyanga udlula ama-euro ayizi-2.800 XNUMX. Kuleli qembu kunabahloli bezabasebenzi, ukuvikeleka kwezenhlalakahle, ezezimali noma izinhlaka eziphakeme zoMnyango Wezokuphatha.
Iqembu A2: Kulokhu umholo wehlela kuma-euro angama-2.200 ngenyanga nezinkokhelo ezimbili ezingeziwe. Kuleli qembu, singathola abaphathi bezobuchwepheshe bokucwaningwa kwamabhuku, ukuphathwa kwezimali noma amasistimu, kanye nobuchwepheshe bolwazi.
Iqembu B: Uma uneziqu zobuchwepheshe obuphakeme, uzokwazi ukufinyelela kuleli qembu. Ngokuqondene nomholo wakhe, kuzoba cishe ama-euro ayi-1.800.
Iqembu C1: Umzimba wokuphatha uvame ukutholakala kuleli qembu. Ukuze ufake isicelo, uzodinga iBachelor's degree. Umholo uphakathi kwe-1.600 euros.
Iqembu C2: Lapha sizohlangana nomzimba osizayo, okuyisidingo esiyisisekelo esizodinga isihloko se-ESO. Bazokhokhisa cishe ama-euro ayi-1200.
Iqembu E: Abasebenzi abancane bazoba nomholo olinganiselwa kuma-euro angama-1000.
Kwenzekani uma ngifeyila ukuhlolwa kweqembu eliphikisayo?
Kuyiqiniso ukuthi ngemuva kwaso sonke isikhathi esichithwe, umzamo, ukubona ukuthi kumisiwe kuyakhathaza impela. Ngakho-ke, kufanele sizame ukwamukela okwenzekile, noma ngabe kungelula. Ezinsukwini ezilandelayo, kungakuhle ukuthi uphumule futhi ujabulele. Yisikhathi sokuzinika isikhathi sokucabanga futhi sikhohlwe ngayo yonke into ngangokunokwenzeka.
Kufanele ubheke ohlangothini oluhle. Ngoba konke lokhu kumayelana nokufunda futhi isikhathi ngasinye sizobe siseduze nomgomo wethu. Okungeza okwengeziwe esikhathini esizayo lapho sivela. Noma kunjalo, ukumise ukuhlolwa kweqembu eliphikisayo, Akusona isiphetho. Kuyindlela yokwazi ukuthola amaphutha nokwenza ngcono amasu okwenza isivivinyo esilandelayo ngendlela ethembele kakhudlwana.